Posted by အလင်းစေတမန် at 12:00 PM3comments:
နှစ်သက်မိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်(၁)ကို ရေးခဲ့ပြီးတာ ကြာပါပြီ။ အဲဒီ ကဗျာ(၁)လေးက ကျွန်တော်လို တရားအားထုတ်ဖို. အပျင်းကြီးသူတွေအတွက် အမြဲဖတ်သင့်တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးရေးတာပါ။ အခုတစ်ခါ ကိုယ်တွေ.၀ိပဿနာဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာ တရုတ်ကဗျာဆရာကြီး Han Shan ရေးတဲ့ကဗျာလေးကို နှစ်သက်မိလို. ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ. အလှဟာ ဇရာဝင်လာပြီးတဲ့နောက် ပြောင်းလဲသွားပုံကို သံဝေဂယူဖို. ကဗျာဆရာက ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။
Posted by အလင်းစေတမန် at 11:38 AM 8 comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လောကကို အောင်နိုင်သူတို့တွင် အကြီးဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ ကိုယ်တော်မြတ် ဟောကြား သင်ကြားတော်မူသော တရားဒေသနာတော်များကလည်း လူအပေါင်း တို.အား အမှောင်လောကကို ကျော်ဖြတ်ရမည့် လမ်းကို အလင်းရောင် ထွန်းပြတော်မူသည်။ အမုန်း တရားနှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲများကို ကျော်လွန်သော၊ မေတ္တာတရား၊ သုခချမ်းသာတို့ဖြင့် တင့်တယ်သော အလင်းလောကသို့ လမ်းပြပေးတော်မူသည်။ဂေါတမဗုဒ္ဒသည် ဒဏ္ဍာရီထဲက သူရဲကောင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ် သက်တော်ထင်ရှား ရှိခဲ့သော သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်၍ ယခု ဗုဒ္ဓဘာသာဟုခေါ်ကြသော ဘာသာ ယုံကြည်မှုကို အစပျိုး ထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဤဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီး သက်ရှိထင်ရှားထွန်းကားခဲ့ ကြောင်း သမိုင်း သက်သေ အထောက်အထားများကို အောက်ပါအချက်အလက်များ၌ ထင်ရှားသည်။
(၁) ကိုယ်တော်မြတ်ကို ကိုယ်တိုင် ဖူးတွေ့ခဲ့ရသူများ၏ အထောက်အထားများရှိသည်။ ထို အထောက်အထားများကို ကျောက်သားပေါ်မှာ ထွင်းထုထားသော ကျောက်ထက် အက္ခရာတင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ စိုက်ထူထားသော ကျောက်စာများ၊ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုရန်တည်ထားသော စေတီ ပုထိုးများရှိသည်။ ဤအထိမ်းအမှတ်များ ကမ္ဗည်းများကို မင်းများနှင့် အခြားလူများက သူ့ကို အမှတ် ရစေရန် တည်ထားခဲ့ကြသည်။ ထိုသူများသည် မြတ်ဗုဒ္ဓခေတ်က မြတ်ဘုရားနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် နေ ထိုင် ဆက်ဆံခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြပြီး ထိုအထောက်အထားများအားဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘ၀ဇာတ်လမ်း ကို သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
(၂) သူ့ခေတ် ဇာတက ၀တ္ထုများမှာ ဖော်ပြထားသော ဗုဒ္ဓခေတ်(ရှေးကျသော)အဆောက်အအုံ အကြွင်းအကျန်များကိုရော နေရာဒေသများကိုပါ ရှေးဟောင်းသုတေသနက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြရ တယ်။
(၃) မြတ်ဗုဒ္ဓတည်ထောင်ခဲ့သော သံဃာအဖွဲ့အစည်းသည် ယခုခေတ်တိုင်အောင် မပျက်မစီးဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိဆဲဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓ၏ဘ၀ဖြစ်စဉ် အချက်အလက်များကို ဆောင်ထားကြသော သံဃာတော်များသည် ထိုအချက်အလက်များကို မျိုးဆက် တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ်အောင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ သယ်ဆောင်တော်မူလာခဲ့ကြတယ်။
(၄) မြတ်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန် စံတဲ့နှစ်က အကြောင်းအချက်တွေရယ်၊ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ သင်္ဂါယနာတင်ပွဲကြီးတွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဓမ္မဒေသနာတော်တွေကို စိစစ် သုံးသပ်ဖို့အတွက် ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို သင်္ဂါယနာ တင်ပြီး ပိဋကတ်တော်တွေကို ဆရာက တပည့်ကိုသင်ကြားပေးတဲ့နည်းနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ယူလာကြတာဟာ ယခုခေတ် ကာလတိုင်အောင်ပါပဲ။
(၅) ကိုယ်တော်မြတ် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီးနောက် ရုပ်ကလာပ်တော်ကို မီးသင်္ဂြီုဟ်တဲ့အခါ ကြွင်းကျန်နေတဲ့ ဓာတ်တော် မွေတော်တွေကို အိန္ဒိယပြည်မှာရှိကြတဲ့ ရှစ်ပြည်ထောင်မင်းများက ခွဲဝေ ယူခဲ့ကြတယ်။ ဒီမင်းတစ်ပါးစီကလည်း သူတို့ ခွဲဝေရရှိခဲ့ကြတဲ့ ဓာတ်တော်တွေကို ဌာပနာပြီး စေတီပုထိုးတော်များ တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ အဇာတသတ် ဘုရင် ရရှိခဲ့တဲ့ ဓာတ်တော် တွေကို အဇာတသတ်ဘုရင်က စေတီတစ်ဆူတည်း ဌာပနာပြီး ရာဇဂြိုဟ်ပြည်မှာ တည်ထားခဲ့ တယ်။ ဒါကို နောက်အနှစ်နှစ်ရာလျော့လျော့လောက်ကြာတော့ အသောကမင်းကြီးက ဒီဌာပနာ တိုက်ကို ဖွင့်ယူပြီး ဓာတ်တော်များကို သူ့ပိုင်နက် နိုင်ငံတော်ကြီးထဲ ကိုးတိုင်း ကိုးဌာနကို ခွဲဝေပေး တော်မူခဲ့တယ်။ အသောကမင်ကြီးက ဒီဓာတ်တော်တွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓာတ်တော် မွေတော်စစ် တွေ ဖြစ်ကြောင်း နောင်လူများ သံသယ မဖြစ်ရအောင် ကျောက်စာရေး ထုထွင်းပြီး ထားခဲ့တယ်။
(၆) `မဟာဝံသ´ ဆိုတဲ့ ရှေးရာဇ၀င် သမိုင်းစာထဲမှာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘ၀ဇာတ်လမ်း အသေးစိတ်ကိုရော ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီး အသောကအကြောင်း အသေးစိတ်ကိုရော အခိုင်အမာ မှတ်တမ်း တင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးထဲမှာ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ တခြားအချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် မင်းတွေ အကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သမိုင်း ထဲမှာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ သက်တော်ထင်ရှားစဉ်အခါက သွားလာ လှုပ်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အရပ်ဒေသတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြထားတယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အစဉ်အလာတွေ ထုံးဓလေ့တွေကို လည်း ဖော်ပြထားတယ်။
(၇) အိန္ဒိယပြည်မှာ ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီးတစ်ဦး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူး တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ရာစုနှစ်ပေါင်း အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ရရှိခဲ့ကြတဲ့ သီရိလင်္ကာလို၊ မြန်မာလို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လော လို နိုင်ငံတွေရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများမှာလည်း အဆက်မပြတ် တည်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်း အထောက်အထား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ စာပေ။ ဓလေ့ထုံးစံ အထောက်အထားတွေကိုလည်း သက်သေ အထောက်အထား ထင်ရှားတွေ့ရတယ်။
(၈) ၄၅ ၀ါ ပတ်လုံး မရပ်မနား ဟေားကြား ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ ဓမ္မဒေသနာတော်တွေကို အစဉ်အ ဆက် မပြတ်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ကြတဲ့ ပိဋကတ် သုံးပုံဟာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အထင်အရှား၊ သက်ရှိ လူသားအဖြစ် ပွင့်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေဖြစ် တယ်။
(၉) ဗုဒ္ဓစာပေ၊ ကျမ်းတွေရဲ့ တိကျ ခိုင်မာမှုကို အထောက်အကူပြုတာက ဘီစီ ၅ရာစု၊ ၆ ရာစု လောက်က ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ အိန္ဒိယသမိုင်းပညာရှင်တွေကို သတင်း အချက်အလက်တွေ ပေးခဲ့ တယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းက တည်ရှိခဲ့တဲ့ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေနဲ့ ဗုဒ္ဒရဲ့ သက်တော်ထင်ရှားတဲ့ ခေတ်ကာလ အခြေအနေတွေ၊ ဗုဒ္ဓ နဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင် ဗိမ္ဗိသာရတို့လို မင်းတွေ လက်ထက်က အခြေအနေများအတွက် လည်း သမိုင်းအထောက်အထားတွေကို ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မှတ်ချက်။ ဦးဆန်းလွင်(ရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ဘာသာပြန်ဆိုထားသော 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်ကြတာက' စာအုပ်မှ ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by အလင်းစေတမန် at 4:16 PM6comments:
မည်သည့်အခါမျှ မပြောင်းလဲနိုင်သည့် စွဲမြဲသောကျင့်ဝတ်များအပေါ် အမြစ်တွယ်နေသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်၍ ပျက်ပြယ်မှုဟူသည် ယနေ.သော်ပင် ဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ (ဂါထရုဂါရတ်)
နှစ်တွေ၊ ခေတ်တွေကား ကုန်ဆုံးပြောင်းလဲခဲ့ ပြီးပါပြီ။ သို.သော် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကား ကျွန်ုပ်တို. ၀န်းကျင်မှာ စံနေတော်မူပါ လေသည်။ ဗုဒ္ဓအသံတော်သည် ကျွန်ုပ်တို. နားထဲတွင် ကြားယောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ (အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းနေရူး)
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြာင်း အနည်းငယ်ဖတ်မိခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိသည့်အရာကို သိမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း၂၅၀၀က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ထားသည်ထက် ပို၍သိကြသည်။ သူတို.သည် ရှေးကပင် ဤပြဿနာများကို လေ့လာခဲ့ကြပြီး အဖြေကိုလည်း တွေ.ရှိခဲ့ကြပေသည်။ (ဒေါက်တာဂရေဟမ်ဟိုး)
ဒဿနသဘော မပါသော ဘာသာရေးသည် ဥပါဒါန် သဘောရှိ၍ လူ.ဘ၀တိုးတက်မှုနှင့် ဗောဓိဥာဏ်၏ အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပြီး၊ ဘာသာတရားသဘော မပါသော ဒဿနသည်လည်း ဘ၀အတွက် အကျိုးထူး တစ်စုံတစ်ရာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ (အိန္ဒိယသူတော်စင် ရှရီအော်ရိုဗင်ဒို)
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ ငြိကပ်တွယ်တာခြင်းမှ လွတ်မြောက်သောအားဖြင့် ဂုဏ်သရေရှိမှု၊ ငြိမ်သက်တည်ကြည်မှု၊ ကရုဏာထားမှုတို.သည် အရှေ.တိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ မူလသင်ကြားချက်များ ဖြစ်သည်။ (အီးအေ-ဘာ့ထ်)
ဘီစီ(၆) ရာစုသည် အသိဥာဏ်နယ်ပယ်၌ ကလေးဘ၀မှ လူကြီးဘ၀သို. ကူးပြောင်းသော ရာစုနှစ်ဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်များ)
ဘာသာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နယ်မြေလုပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ကြသော ဘာသာရေး စစ်ပွဲများ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၌ မှတ်တမ်းတင်ရသည်မှာ အကျည်းတန်လှပါ၏။ မူလ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖျက်ဆီးရုံသာမက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို သိက္ခာချရာလည်း ရောက်၏။ ထို.ပြင် ဘာသာမဲ့ ၀ါဒီများကိုလည်း လက်ယပ်ခေါ်ရာ ရောက်၏။ အမှန်အားဖြင့် လူ.လောကအတွက် ဘာသာတရားဟူသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော သဘောကို ဆောင်ပါ၏။ (ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်)
ဘာသာမဲ့ဟူသည်ပင် ဘာသာတရား တစ်မျိုး၏ အမည်ဖြစ်၏။ (အိန္ဒိယသမ္မတဟောင်း ဒေါက်တာ ရာမာခရစ်ရှနန်)
မြတ်စွာဘုရားမှတစ်ပါး ထိုကဲ့သို.သော မဟာဂရုဏာရှင်မျိုးကို အိပ်မက်ထဲ၌ပင် သင်တွေ.နိုင်မည်မဟုတ်။ (ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်)
ကျွန်ုပ်တို.သည် မကြုံစဖူး စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ အားငယ်မှုများ ကြုံတွေ.နေကြရပါသည်။ ထိုသို. ကြုံတွေ.ခံစားနေကြရသည်မှာ ဘ၀တွင် ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် လက်တွေ.ကျကျ အသုံးချနိုင်သော အတွေးအခေါ် အယူအဆများ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို.တစ်တွေသည် ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝမှု ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့်ကြားတွင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာအားဖြင့် ချွတ်ခြုံကျ နေကြရပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထု ကြွယ်ဝသော်လည်း စိတ်ချမ်းသာမှုကင်းသော အခြေအနေတွင် စိတ်အေးချမ်းသာမှု အမှန်တကယ် ရရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြည့်ဖို. သင့်လှပါသည်။ ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်သည် စိတ်ချမ်းသာမှုကို အမှန်တကယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ (ဂျွန်ဝါလ်တာ)
သကျမုနိဟူသည် လမ်းစဉ်အမှန်တရား၊ ဘ၀တို.နှင့် အမှန်တကယ် အနီးစပ်ဆုံး သင့်မြတ်လျော်ကန်သူဖြစ်ကြောင်း ပို၍ပို၍ ယုံကြည်လာရသည်။ (ဘီရှော့မီလ်မန်)
လူသားတစ်ဦးဖြစ်သော ရှင်တော်ဗုဒ္ဓသည် လူသားအားလုံး၏ အစုအဝေးဖြစ်သော လောကကြီးထဲမှာ ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီး "သင်တို.အား အတ္တကျေးကျွန်၏ ဒုက္ခဗရပွေထဲမှ ကယ်ထုတ်ရန် ငါဘုရား ပွင့်တော်မူခဲ့သည်ဟု" ဟု မိန်.မြွတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ၀ိသေသတရားပင် ဖြစ်သည်။ (ရာဘင်ဒရာနတ်တဂိုး)
ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည် ဘ၀မှအမြင့်ဆုံးအကျိုးကို ရယူရန် အမြင့်မားဆုံး လမ်းစဉ်ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် အစီအမံတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ အသိပညာစိုးမိုးသော အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဘာသာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓသည် ဘာသာပြောင်းသူများကို အနိုင်ယူရန် တရားဟောခြင်း မဟုတ်ဘဲ တပည့်သာဝကတို.ကို အသိဥာဏ်အလင်း ရရှိစေရန် တရားဟောခြင်း ဖြစ်သည်။ (အနောက်တိုင်းစာရေးဆရားတစ်ဦး)
ဗုဒ္ဓနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးထားရမည့် အဓိကအချက်မှာ ဗုဒ္ဓသည် လူသားထက်ကျော်လွန်သော အခြားတန်ခိုးရှင် တစ်ဦးဦး မဟုတ်ကြောင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆိုထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ (ဆရာတော် သဒ္ဓါတိဿ)
လူသားများကို လွတ်မြောက်စေသူမှာ ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပေ။ သို.သော် ဗုဒ္ဓသည် သူကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ပြီးသလို လူသားများ၏ လွတ်မြောက်ရေးကို ဟောကြားပြသသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သစ္စာဒေသနာကို လူသားများ လက်ခံကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓဟောသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဗုဒ္ဓ၏ စကားတော်များကြောင့် နိုးကြားလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အမြင်မှန်ရရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို. ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ် အလင်းရောင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ (ဒေါက်တာအိုဒင်ဘာ့ဂ်)
ဗုဒ္ဓသည် လူသားမျိုးနွယ် အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ စာရိတ္တသူရဲကောင်းမျိုးနွယ်၊ လွတ်မြောက်ရေးမျိုးနွယ်၊ ဗုဒ္ဓမျိုးနွယ်စုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ (မန်မထနတ်ဆပ်စ်ထရီ)
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကင်းငြိမ်းအောင် တစ်ခုတည်းသော လမ်းသာရှိတယ်လို. ရှင်းရှင်းကြီး ဟောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အစဉ်သတိရှိနေရမည့် အမြဲသိနေရမည့် နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတိရှိနည်းရဲ. သဘောကို ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ရှုပွားမှသာ ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်ပါမယ်။ (၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု)
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၏ သဘောကို တစ်လုံးတည်းသောစကားဖြင့် ဖော်ပြလိုလျှင် မှန်ကန်သောတရားတော် ဟု ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ (ဗိုလ်မှုးကြီးအောလ်ကော့)
Posted by အလင်းစေတမန် at 9:00 PM2comments:
မေး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ သိပ်ပြီး အထင်ကြီးနေပုံ အရ ဗုဒ္ဓဘာသာလျှင် မှန်ကန်ပြီး အခြားဘာသာများမှာ မှားသည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။
ဖြေ။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်သော မည်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှ အခြားသော ဘာသာများသည် မှားသည်ဟု မယူဆပါ၊ မထင်ကြပါ။ အခြားဘာသာများကို သေသေချာချာ မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်အောင် သဘောထားအမြင် ကျယ်ကျယ်ဖြင့် လေ့လာခဲ့လျှင် မိမိသက်ဝင် ယုံကြည်သော ဘာသာသာလျှင်မှန်ပြီး ကျန်သောဘာသာများမှာ မှားသည်ဟူသော အတွေးမျိုး ၀င်နိုင်စရာမရှိပါ။ အခြားသော ဘာသာများကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်အောင် သဘောထားအမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် လေ့လာကြည့်ပါက ထိုဘာသာများတွင် တူညီချက်များ များစွာရှိသည်ကို ပထမဦးစွာ သတိပြုမိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးသော ဘာသာများက လက်ရှိလူသား၏ အခြေအနေသည် ကျေနပ်စရာ မကောင်းသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကြ ပါသည်။ လူသား၏ လက်ရှိအနေအထားကို ပို၍ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်လိုလျှင် သဘောထားနှင့် အပြုအမူတို.တွင် ပြောင်းလဲပေးရန် လိုအပ်သည်ကို ဘာသာတိုင်းကပင် ယုံကြည်ကြပါသည်။ လူ.ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် ပတ်သက်၍ မေတ္တာတရား၊ ကရုဏာတရား၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်မှု၊ စိတ်ထားမြင့်မြတ်မှု၊ သဘောထားကြီးမှု၊ လူမှုရေးတာဝန်များ သိတက်ကျေပွန်မှုတို.ကို ဘာသာတိုင်း၏ အဆုံးအမများတွင်တွေ.ရပြီး ဘာသာတိုင်းတွင် လုံးဝပြည့်စုံမှုသဘော (absolute)ကိုလည်း လက်ခံကြသည်ကို တွေ.ရပါသည်။ သို.သော် ဤအကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြရာတွင် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး၊ အမည်နာမအမျိုးမျိုး၊ သင်္ကေတ အမျိုးမျိုးကို သုံးပြီးဖော်ပြကြသည်။ အမြင်ကျဉ်းကျဉ်း၊ အမြင်တိုတိုဖြင့် မိမိ၏ အမြင်တစ်ခုတည်းကိုသာလျှင် တွယ်ကပ်ပြီး မြင်တက်သည့် အခါမျိုးတွင်သာ အခြားဘာသာအယူအဆများကို သည်းမခံ ခွင့်မလွှတ်ခြင်း၊ မိမိဘာသာ သာလျှင် မှန်ကန်ပြီး အခြား ဘာသာတွေအားလုံး မှားသည်ဟူသော လွဲမှားသည့် မောက်မာမှုမာနများ ပေါ်ထွက်လာတက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ဦး၊ ပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ဦး၊ တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးနှင့် အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတစ်ဦးတို.သည် လက်ဖက်ရည် ထည့်ထားသောခွက်ကို ကြည့်ရှုနေကြသည် ဆိုပါစို.။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးက ခွက်ကို ကပ်(ပ်) (cup) ဟုပြောပါသည်။ ပြင်သစ်ကလည်း ကပ်(ပ်) မဟုတ်၊ တေဆဲ (tasse) ဖြစ်သည်ဟု ပြောပေမည်။ ထိုအခါ တရုတ်ကလည်း 'ခင်ဗျား တို.နှစ်ယောက်လုံး မှားပါတယ်၊ အဲဒါ ပိုင် (pei) လို.ခေါ်ပါတယ်' ဟု ပြောပေလိမ့်မည်။
ထိုအခါ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးက 'ဟားဟား၊ ခင်ဗျားတို. အားလုံး မှားတယ်။ အဲဒါ က၀မ် (cawan) လို.ခေါ်တယ်' ဟု ပြောပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကလည်း အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ကို လှန်ပြီး ခွက်ကို ကပ်(ပ်) လို.ခေါ်သည်မှာ မှန်ကန်ကြာင်း သက်သေအထောက်အထား ပြပါမည်။ ထိုအခါ ပြင်သစ်လူမျိုးက 'ခင်ဗျားတို. အဘိဓာန်က မှားနေတယ်၊ ကျွန်တော်တို. အဘိဓာန်ထဲမှာ ခွက်ကို တေဆဲ လို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်' လို. ငြင်းချက်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ တရုတ်လူမျိုးက 'ကျွန်တော်တို. အဘိဓာန်က ခင်ဗျားတို. အဘိဓာန်ထက်ပိုပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေးကျပါတယ်၊ ပြီးတော့ တရုတ်စကားကိုပြောတဲ့ ဦးရေဟာ ဒီကမ္ဘာမှာဆိုရင် အများဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို.ရဲ. အဘိဓာန်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ခွက်ကို ပိုင်လို. ခေါ်ခြင်းက မှန်ပါတယ်' လို. ပြောဆိုချေပပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို. တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပြောဆို ငြင်းခုံနေကြသည့် နေရာသို. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ရောက်လာပြီး ခွက်ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး ခွက်ထဲမှ လက်ဖက်ရည်ကို သောက်ချလိုက်ပါသည်။ သောက်ပြီးနောက် ငြင်းခုံနေကြသူများကိုလည်း 'ခွက်ကို ကပ်(ပ်) ခေါ်ခေါ်၊ ပိုင် ခေါ်ခေါ်၊ တေဆဲ ခေါ်ခေါ်၊ က၀မ်ခေါ်ခေါ်၊ ခေါ်ချင်သလိုသာ ခေါ်ကြပါ၊ ခွက်ဆိုတာကတော့ တစ်ခုခုကို သောက်ရာမှာ အသုံးပြုဖို.သာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို. ငြင်းခုံနေကြတာတွေကိုရပ်ပြီး သောက်ကြပါ။ ငြင်းခုံပြောဆိုနေရတဲ့အတွက် အာခြောက်နေတာကို ရပ်ပြီး ရေငတ်ပြေအောင် သောက်လိုက်ကြပါဗျာ' ဟု ပြောသည် ဆိုကြပါစို.။ ဤအမြင်သဘောထားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာက အခြားအခြားသော ဘာသာများ အပေါ်တွင်ထားသော သဘောထား ဖြစ်ပါသည်။
Posted by အလင်းစေတမန် at 11:49 PM6comments:
ကျွန်တော်မောင်ရဲကြီး တစ်ယောက် မသေခင်ဘာလုပ်ကြမလဲ(၁) ရေးပြီးတဲ့နောက် အားရကျေနပ်ခြင်း မရှိသေးတဲ့အတွက် အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ရေးရပြန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်မှာ သမဏဖြစ်စေ၊ ဗြဟ္မဏဖြစ်စေ၊ နတ်ဖြစ်စေ၊ မာရ်နတ်ဖြစ်စေ တောင့်တ၍ မရကောင်းတဲ့အရာ ငါးမျိုးရှိတယ်လို. ဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်ငါးမျိုးလဲ ဆိုတော.ဗျာ-
၁။ မအိုပါစေနှင့်ဟု တောင့်တ၍မရ။
၂။ မနာပါစေနှင့်ဟု တောင့်တ၍မရ။
၃။ မသေပါစေနှင့်ဟု တောင့်တ၍မရ။
၄။ မကုန်ဆုံးပါစေနှင့်ဟု တောင့်တ၍မရ။
၅။ မပျက်စီးပါစေနှင့်ဟု တောင့်တ၍မရ တဲ့ဗျ။
ဒီတော့ဗျာ မိတ်ဆွေတို.ရော ကျွန်တော်ရော အိုခြင်းတရား နာခြင်းတရားတွေ မလွဲမသွေကြုံတွေ.ကြရမှာပါ။ ကိုယ်သေရမှာ၊ နာရမှာကို မသိနိုင် မမြင်နိုင်ဖြစ်နေတာဟာ မောဟကြောင့်ပါ။ မအားသေးတာကို အကြောင်းပြပြီး တရားအားထုတ်ဖို. ပျင်းနေကြမယ် ဆိုရင်တော့ သေခြင်းတရားက ကိုယ်မအားသေးတာ မစောင့်ပါဘူးလို. ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အောင်ဆန်းတပ်ဦးဆရာတော် မိန်.ကြားတော်မူသလို ကနေ.သေတဲ့ မသာတွေ အားလို.သေတာ တစ်ယောက်မျှ မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ တကယ်တော့ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အချိန်သီးသန်.ပေးဖို. မလိုပါဘူးဗျ။ နေ.စဉ် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သတိတရားလေးနဲ. နေထိုင်တက်မယ်ဆိုရင် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာ ပြောဝံ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဘေးကြီးငါးမျိုးဆိုက်ရောက်လာရင် တရားအားထုတ်လို. မရတော့ပါဘူးလို. သတိပေးတော်မူ ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်ငါးမျိုးလဲဆိုတော့-
၁။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့် အိုမင်းလာတဲ့ဘေး။
၂။ မကျန်းမမာ ဖြစ်လာရတဲ့ဘေး။
၃။ အစားအသောက် ရှားပါးရတဲ့ဘေး။
၄။ တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်း သူပုန်ထတဲ့ဘေး။
၅။ သံဃာကွဲပြား လာတဲ့ဘေး တို.ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံသားအချို. ၀ိပဿနာ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို သိရှိလာကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို.ပင် လာ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ် နေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်တို. ဗုဒ္ဓဘာာဝင် အများစုက သတိလက်လွတ် ငှတ်တောင်ကျွတ်နေထိုင်နေကြပါတယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ. လင်္ကာလေးနဲ. နိဂုံးချုပ်ပါရစေ ခင်ဗျ။
ခင်မင်လေးစားရတဲ့ Blogger အပေါင်း ဗုဒ္ဓခေတ်မြတ် တွေ.ရကျိုးနပ်ကြပါစေဗျာ။
Posted by အလင်းစေတမန် at 9:41 PM 11 comments:
ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုIdulize က Tag ထားတယ် Mail ပြန်စစ်ဆိုမှ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမုန်းဆုံး(၁၀)ချက် ရေးရမယ်ဆိုတာ သိရပါတော့တယ်ဗျ။ ကိုIdulize ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ 'အလို' ကဗျာလေးနဲ. ရေးထားတာပါ့လား။ ကျွန်တော်လည်း ကဗျာလေးနဲ. အစ်ကိုလို ရေးချင်ပေမဲ့ ရေးလိုက်ရင် အစ်ကိုရယ်၊ မောင်သီဟညိမ်း တို.လို ကဗျာရေးနေတဲ့ Blogger တွေက ကဗျာစပ်နည်း သင်တန်းဖွင့်ပေးပါ ဆိုပြီး ပြောလာကြရင် မအားရတဲ့ကြားထဲ သူတို.ကို Lecture ရိုက်ရမှာ စိုးရိမ်တာနဲ. ကဗျာနဲ. မရေးတော့ပါဘူး။ (ကဗျာမစပ်တတ်ပေမဲ့ သိက္ခာတော့ အကျမခံဘူး) ကဲ... မကျေနပ်တဲ့ (၁၀)ချက်နဲ. ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် ပြန်လှန်ထောင်း ရမယ်ဆိုရင်........
(၁) တစ်စုံတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းရသည်ကို စိတ်မရှည်တက်ခြင်း။
(၂) အင်္ဂလိပ်စာကို မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပြိုင်ပွဲများ ၀င်ပြိုင်ခြင်း၊ မိမိဘာသာလေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်မလာခြင်း။
(၃) ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ရေးသားနေသော်လည်း သူငယ်ချင်းများ အပေါ်တွင် သံယောဇဉ် ကြီးလွန်းခြင်း။
(၄) မှန်တယ်ထင်ရင် တဇွတ်ထိုး လုပ်တက်ခြင်း။
(၅) ပြန်မပြော နားမထောင်နေတက်ခြင်း။
(၆) အသင့်အတင့် အမှန်အတိုင်း နှလုံးသွင်းနိုင်မှု မရှိသေးခြင်း။ (ယောနိသောမနသိကာရ မရှိသေးတာပေါ့ဗျာ)
(၇) မြတ်စွာဘုရားရှင်က အကျိုးမရှိကြောင်း တရား(၆)ပါး တွင် တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားခြင်းဟု ပါရှိသော်လည်း သွားလာတက်ခြင်း။
(၈) မိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးကို ယခုထိ အနည်းငယ်မျှပင် မဆပ်နိုင်ခြင်း။
(၉) သေခြင်းတရားက မှည့်နေတဲ့ အသီးလို အချိန်မရွေးကြွေကျနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ သတိလက်လွတ် နေခြင်း။
(၁၀) Internet connection ကို ဖုန်းနှင့် ချိတ်သုံးနေရခြင်း။ (သီလမရှိတဲ့သူတွေ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ပြေတယ်ကို မရှိဘူး။)
ကဲ.... အစ်ကိုရေ၊ ရေးတက်သလိုရေးလိုက်ပြီဗျာ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ။
Posted by အလင်းစေတမန် at 11:21 PM3comments: